बोलेरोले स्कुटरलाई ठ’क्क’र दिँदा शिक्षिकाको मृ’त्यु ! – Online Khabar 24
बोलेरोले स्कुटरलाई ठ’क्क’र दिँदा शिक्षिकाको मृ’त्यु !
भरतपुरमा बोलेरोले स्कुटरलाई ठ’क्क’र दिँदा एक शिक्षिकाको मृ’त्यु भएको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार मृ’त्यु हुनेमा भरतपुर ५ विकास चोककी सुलोचना ढकाल रहेकी छिन् ।
ना ६० प ९९०७ नम्बरको स्कुटरमा सवार ढकाललाई ब ३ च ४०३८ नम्बरको बोलेरेले कार्तिक १२ गते दिउँसो साँढे दुई बजे कल्याण पुरमा ठ’क्क’र दिएको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ ।
ठ’क्क’रबाट घा’इते भएकी ढकाललाई चितवन मे’डि’कल कलेज (सिएमसी) ल्याइए पनि उनको उप’चारका क्रममा मृ’त्यु भएको प्र’हरी कार्यालयले जनाएको छ ।ढकाल गुञ्जानगर मावि भरतपुरकी शिक्षिका समेत हुन् । यो पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ जोरपाटीस्थित सडकमा ट्याङ्करले स्कुटरलाई ठ’क्कर दिँदा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ भने एक जना घा’इते भएका छन्।
बा ६३ प ६२०४ नम्बरको स्कुटरलाई बा २ ख १३८ नम्बरको ट्याङ’करले मंगलबार बिहान ठ’क्क’र दिँदा स्कुटर चालक गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ माकलबारी बस्ने ४४ वर्षीय गंगाराज राईको मृ’त्यु भएको छ ।
दुर्घ’टनामा ग’म्भीर घाइते भएका उनको ओम अस्पताल चाबहिलमा उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएको हो । साथै दु’टनामा घा’इते भएकी स्कुटरमा सवार उनकी छोरी १९ वर्षीया सुस्मा राईको सोही अस्प’तालमा उपचार भइरहेको छ ।
ट्या’ङकर चालकलाई नियन्त्र’णमा लिएर यस सम्ब’न्धमा प्रहरीले थप अ’नुसन्धान गरिरहेको छ । यो खबर बुटवल दैनिकमा छ । माथिको तस्बिर केवल प्रतिका’त्मक मात्र हो । यो पनि पढनुस, आफैंले चलाएको मोटरसाइकल विद्युतको पोलमा ठो’क्कि’एर एक जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
मोटरसाइकलमा सवार अर्का एक जना घा’इते भएका छन् । रौतहटको चन्द्रपुरबाट घर जाने क्रम’मा दुर्घ’टनामा परेर समाजवादी विद्यार्थी युनियन रौतहट जिल्लाका उपाध्यक्ष गरुडा, महम्मदपुरका २५ वर्षीय अभय यादवको मृ’त्यु भएको हो ।
यादवले चलाएको मोटरसाइकल गौर–चन्द्रपुर सडकखण्डको बसन्तपुर एरियामा गएराति ११ बजे अनियन्त्रित भएर सडक छेउको विद्युत पोलमा ठो’क्कि’एको थियो ।सोही मोटरसाइकलमा सवार गरुडा–४ का ३० वर्षीय नवलकिशोर पटेल भने घा’इते भएको ईलाका प्रह’री कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख एवं डिएसपी लिलाराज लामिछानेले बताए ।
घा’इते पटेलको चन्द्रपुर अस्पता’लमा उप’चार भइरहेको छ । यस्तै, ती’व्रग’तिमा गुडिरहेका दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठो’क्किँ’दा झापाको गौरादहमा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ भने दुई घा’इते भएका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय गौरादहका अनुसार बिहान ८ बजेतिर गौरादह नगरपालिका–४ स्थित स्कुलचौन–चाप्रामारी धरधरे सडकखण्डमा दुई मोटरसाइकल एकापसमा ठो’क्कि’एर दुर्घटना हुँदा मे ९ प २७०३ का मोटरसाइकल चालक गौरादह-५ का अन्दाजी ४० वर्षीय भानु भनिने वेणु अधिकारीको घ’टना’स्थलमै मृ’त्यु भएको हो ।
अधिकारीले चलाएको मोटरसाइकल र मे६प ५४१६ नंको मोटरसाइकल एकापसमा ठो’क्कि’एको प्रहरीको भनाइ छ । दु’र्घ’टनामा परेर ५४१६ नं को मोटरसाइकलका चालक गौरादह–५ चप्रामारीका ३० वर्षीय अनुप राजवंशी र पछाडि सवार १६ वर्षीय ललित शर्मा घाइते भएका छन् । उनीहरु दुवै जनाको उप’चारका लागि न्यूरो अ’स्पताल विराटनगर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।यो खबर ताजा खबरमा छ ।
Prevट्याङ्करले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा बुवाको मृ’त्यु, छोरी घा’इते !
nextप्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकीले जिते दोहोरी च्याम्पियनको उपाधी